Nhau - Ndeipi ramangwana reNC machining hunyanzvi uye maitiro ekusarudza
MuChina, CNC machining hunyanzvi hwave hwepasirese mumakore gumi apfuura, uye CNC muchina chishandiso vagadziri vari kutumbuka kwese kwese. Chikumbaridzo cheNC machining emabhizinesi chiri kudzikira uye kuderera, uye tekinoroji kushandiswa kweNC machine hunyanzvi hwunonyanya kushandiswa. Iko kunoonekana kunguva yemapure uye pfuti.
Nekusimuka kweInternet mumakore achangopfuura, vechidiki uye vazhinji vari kudzingirira basa reInternet, izvo zvinotungamira mukushomeka kwematarenda muCC michina indasitiri. Iyo yekurimwa kweNC machining nyanzvi haina kukodzera. Izvo zvakare zvakafanana mumunda wekutsvaga uye kusimudzira kweCNC muchina maturusi. Kugadziridzwa kweCCC machining tekinoroji yehunyanzvi hakugone kusiyaniswa nemidziyo uye tekinoroji. Mukupedzisira, iko kushaikwa kwekutungamira kweveCNC machining nyanzvi Icho chimwe chezvikonzero zvakakosha zvekuti epamba nhamba yekudzora tekinoroji yasara kumashure kweJapan neGerman.
Yenhamba yekudzora tekinoroji, inozivikanwawo sekombuta manhamba ekudzora tekinoroji, ndiyo tekinoroji yekuona chirongwa chedhijitari kudzora kuburikidza nekombuta. Iyo diki mirairo inogadzirwa nekombuta kuburikidza nekuraira kugadzirisa inopfuudzwa kune servo drive mudziyo kutyaira mota kana hydraulic actuator kutyaira michina kumhanya. Iwo maCNC mahunyanzvi ndivo vashandi vanopedzisa nhevedzano yekushanda uye vane hunyanzvi hwehunyanzvi hwetarenda Parizvino, matarenda akadaro anowanzo kuvepo Inogona kuwanikwa kubva kumatanho maviri: imwe matarenda akadzidziswa neNC machining nyanzvi yekudzidzisa chikoro; imwe ndeye CNC yehunyanzvi uye yehunyanzvi matarenda anokura mushure mevashandisi kudzidza CNC tekinoroji kuburikidza ne-ne-basa-basa kudzidziswa kwemabhizinesi.
Munguva yekukwidziridzwa kwechigadzirwa, mhando uye nemazvo zvigadzirwa zvakawandisa uye zvakanyanya kudikanwa, uye izvo zvinodikanwa zveCCC machine machining zvakare akakwirira uye akakwirira. Kushaikwa kwematarenda muCCC machining hunyanzvi kwakakonzera kushomeka kwematarenda mumusika webhuruu kora. Mune ramangwana, ichave zvakare iri yemamwe matarenda mapoka emabhizinesi kuti ararame.